Fitaovana fanangonana ambongadiny menaka plastika Igel baolina mpanamboatra sy mpamatsy | Zhongtai
Ball Igel plastika dia sivana biolojika mahazatra, ny fahombiazany tsara ary ny fanatsarana maharitra. Ny baolina igelantsika dia vita amin'ny plastika, noho izany dia mavesatra izy ary afaka mitsingevana eny ambonin'ny rano, ny endrika dia baolina. Izy io dia miavaka amin'ny fanoherana ny rano kely, ny rivotra tsara, ny ankamaroan'ny baolina igel dia manana endrika familiana, toy ny deflector, ny fantsona fanodinana, ny rano dia azo zaraina mitovy ary mitombo ny fikorianan'ny rano.
Tsara kokoa ny fifanakalozana entona, afaka mampitombo ny atiny miiba oksizenina sy manala ny H2S sy ny CO2.
Ampiasaina ao anaty dobo sy anaty rano izy io.
Endri-javatra ny Ball Igel Plastika
Fananganana fitaovana plastika momba ny tontolo iainana miaraka amina fanamarihana maro. Ny bala biolojika rehetra dia manana velarana midadasika mba hitomboan'ny bakteria nitrifying. Izy io dia afaka manampy amin'ny fametrahana rafitra farany sy mifandanja indrindra amin'ny filtrasiôna biolojika ary azo ampiasaina amin'ny tanky rano madio sy an-dranomasina manivana biolojika amin'ireo tanky rano sy rano madio.
Famaritana ara-teknika ny baolina Igel plastika
Baolina igela plastika
Toetra ara-batana sy simika an'ny Ball Igel Plastika
Fampisehoana / fitaovana
Teo aloha: Fonosana Scrubber Q-pack plastika
Manaraka: Kitapo peratra plastika ho an'ny fonosana tilikambo
Fonosina Tower Ralu amin'ny plastika